ဇာတ်လမ်းတွဲနာမည်ဖြစ်တဲ့ Flower Of Evil ၏အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ Yoo Jung Hee | News Bar Myanmar
ဇာတ်လမ်းတွဲနာမည်ဖြစ်တဲ့ Flower Of Evil ၏အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ Yoo Jung Hee
Flower Of Evil ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ screenwriter ဖြစ်တဲ့ Yoo Jung Hee ဟာမကြာသေးမီကပင် သူမရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပက်သက်ပြီး အင်တာဗျုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ရေပန်းအစားဆုံး Drama တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေက ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဖန်တီးပုံဖော်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေနဲ့လည်း ပက်သက်ပြီး သိချင်နေကြပါတယ်။
စာရေးဆရာမ Yoo Jung Hee ကသူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ပရိတ်သတ်တွေ စတင်စိတ်ဝင်စားလာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ” ၁၄ နှစ်လုံးလုံး ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ယောကျ်ားက လူသတ်သမား ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရဲ့အသွားအလာကြောင့် ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ “ကျွန်မဇာတ်လမ်းမျိုးစုံကို တွေးကြည့်ခဲ့တယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ အခုလို ဇာတ်မျိုးကို စဉ်းစားမိတယ်။ ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ယောကျ်ားနဲ့ သူ့ကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာ ချစ်မိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ကျွန်မက အဲ့လိုဇာတ်အသွားအလာကို ကြိုက်တယ်”
နောက်ပြီးတော့ ” လူတစ်ယောက်က ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက် ကိုယ်ရဲ့အတိတ်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေရတယ်။ အဲ့လိုလူမျိုးကို ကျွန်မတို့က သူတို့ဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လိမ်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်သင့်လို့လား?
ဒါ့အပြင် ဇာတ်လမ်းကို ပိုကြွသွားစေတာက မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကို လူသတ်သမားနဲ့စုံထောက်လိုပုံစံမျိုးလေး ဖန်တီးထားလိုက်တာပါ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေ အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Flower Of Evil ဆိုပြီးနာမည်လေးကတော့ ” သူ့ရဲ့အဓိပါ္ပယ်က အတိတ်ဆိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဘဝကိုရထားပင်မဲ့ သူ့မှာလည်း ပန်းပွင့်လေးတွေ ပွင့်လန်းနိုင်ပါသေးတယ်။
Do Hyun Soo ရဲ့ဘဝကို လက်ခံပေးဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ Moon Chae Won ဆိုတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဆိုပြီး အဓိပါ္ပယ်ဖွင့်လိုရပါတယ်။” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနှင့် ပက်သက်ပြီးလည်း စာရေးဆရာမက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောထားပါသေးတယ်။
အားလုံးကလည်း ကြိုးစားဖန်တီးထားတဲ့အတွက် ဆက်လက်အားပေးကြဖို့လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေကော Flower Of Evil ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြိုက်ကြရဲ့လား?? တစ်ခုခု ပြောပေးခဲ့ပါဦး။
Next ပြစ်မှုတစ်ခုကြောင့် အေဂျင်စီမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ "The World of the Married" ရဲ့ Jung Jun Won »
Previous « စက်တင်ဘာလအတွင်း ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် debut နဲ့ comeback များ